Muqdisho: Muuqaalka Guud Ee Goobta Qaraxu Ka Dhacay
Muqdisho (Dhamays) – Waxa Maalinba Maalinta ku xigta isa-soo taraya Tirada Dadka ku Geeriyooday Qarax Sabtidii Toddobaadkan ka dhacay Isgoyska Soobbe ee Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Dalka Soomaaliya.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaadhi kuwa Xamuulka qaada ah oo laga soo buuxiyey Waxyaabaha Qarxa, ayaa waxa hore loo sheegay inay ku dhinteen Dad gaadhaya 265 Qof oo dhammaantood Shacab ahaa, waxaana ku dhaawacmay illaa 300 Qof.
Laakiin, waxa tan iyo Maalintii Qaraxaasi dhacay Dad nool iyo Meydadba laga baadhayey Dhismayaasha burburay hoostooda, taasina waxay keentay in la helo Dad geeriyooday oo dhismayaashaa ku hoos jiray, halka Maanta oo dambaysay Qof nool laga soo saaray.
Sawirro laga soo qaaday Qofka Nolosha lagaga soo saaray Dhismayaasha Qaraxaasi ku burburay, ayaa muujinaya Nin dhallinyaro ah oo kooxa Gurmadka deg-degga ahi ay ka soo soo saarayaan dhisme aad u burburay hoostiisa.
Ninka Dhallinyarada ah ayaa la rumaysan yahay inuu Shaqaale ka ahaa Xarun Ganacsi oo ku taallay Dhismayaasha burburay.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) oo Shir Jaraa’id ku qabtay Xarunta Gurmad Qaran Shalay, ayaa soo bandhigay Xogtii ugu dambeysay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi.
Wasiirka ayaa sheegay in ay korodhay Tirada dhimashada, isagoo sheegay mareyso 281 Qof, halka dhaawaca ku dhawaad uu marayo 300, Wuxuuna sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay bixisay lacag gaadheysa Hal Milyan oo Dollar oo lagu caawinayo dadkii dhibaatada ka soo gaadhay Qaraxaasi.
Dhanka kale, waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa Muuqaal guud oo laga qaaday Baaxadda Dhulka uu Qaraxu saameeyay, Guryaha Burburay iyo dhibaatada ka dhalatay qaraxaasi.
Muuqaalkan oo uu duubay Telefiishanka Dawladda Soomaaliya, ayaa muujinaya in Qaraxii Sabtidii uu saameeyay Dhul Cabbirkiisu ka badan yahay 100 Mitir oo isku wareeg ah isla-markaana uu baa’biiyey guud ahaan Dabaqyadii ku yaallay hareeraha Waddada halka uu ka dhacay oo ahayd Isgoyska loo yaqaanno Soobbe ee Magaalada Muqdisho.
Halkan Hoose ka Daawo Muuqaalkaasi oo Qalbiga ku dhaqaajinaya
Previous: Bulsho wada siyaasi ah !!
Next: Madaxweyne Siilaanyo Oo Safar Ugu Baxay Bariga Dalka